Ispoortiin aadaa xiyyeeffannaa gahaa argataa hinjiru
Ispoortiin aadaa xiyyeeffannaa gahaa argataa hinjiru Featured
Ispoortiiwwan aadaa keessaa tokko gulufa fardaati
Finfinnee: Addunyaarratti ispoortiin ammayyaa osoo hinjalqabamin ummata biratti hordofamaa kan ture ispoortii aadaa ta'u seenaan ni mul'isa. Ispoortichi yoomiifi eessatti akka jalqabame beekamuu baatus sochii dhalli namaa jireenyasaa guyyuu geggeeffachuuf taasisu wajjin kan uumameedha jedhama.
Akka seenaan muldhisutti dhaloota Kiristoos dura jaarraa jahaffaafi torbaffaa dura naannawawwan adda addaatti sadarkaa maatiitti, gandaafi naannawaatti gageefamaa ture jedhama. Daloota Kiristoos booddees mootiiwwan yeroowwan adda addaatti uumamaniin itti fufusaatu himama.
Biyya keenyattis mootonni yeroo sanaa wayita duulaa deebi'an qondaaltonniifi loltonnisaanii gaaddisa masaraa mootichaa jalatti walarguudhaan yeroo aara galfannaasaanii hordofaa turaniirru.
Haata'uu malee koreen ispoortii aadaa Itoophiyaa waggoota 1940n keessa hundeeffamee ispoortiin aadaa gaggeeffamaa tureera.
Korichi yeroo gabaabaa keessatti qabxii gaarii galmeessisuudhaan guutummaa biyyaatti ummata sadarkaa sadarkaadhaan waan hirmaachiseef bara 1970 federeeshiniin ispoortii aadaa akka hundeeffamu taasifame.
Federeeshinichis seera ispoortichi ittiin gaggeeffamu baasuudhaan guutummaatti waggaa waggaadhaan shaampiyoonaa ispoortii aadaa gandaa qabee hangaa biyyaalessaatti gaggeessaa jira.
Shaampiyoonaan kun baranas yeroo 12faf ji'a dhufu keessa naannoo Beenushaangul Gumuzitti qopheessummaa Ministeera Dargaggootaafi Ispoortii Federaalaatiin ni gegeeffama jedhamee eegama.
Qophii kanaaf Biiroon Dhargaggootaaf Ispoortii Bulchinsa magaalaa Finfinnee shaampiyoonaa ispoortii aadaa torban tokkof dirree Dhaabbata Ispoortii Jaanmeedaatti gaggeessuudhaan Dilbata darbe xumureera.
Yeroo 8faf kan qohaa'ee shaampiyoonaa Magaalaa Finfinnee kanarratti korniyaalee lameeniinuu ispoorteessitoonni 216 kan hirmaatan yoo ta'u, isaan keessaa dubartoonni 147fi dhiironni 69 ta'uun beekameera.
Shaampiyoonichi adeemsifamaa kan ture akaakuuwwan ispoortii wadhaansoo, qillee, korboo, gulufa fardaafi sharxii, saddeeqa abbaa boolla 12f 18, shaa, buubiifi xiyyaa ta'usaati.
Tapha kanatti kutaaleen magaalaa torba akaakuuwwan ispoortii sagaliin kan hirmaatan yoo ta'u, Eekkaan walumaagalatti waancaawwan 19 fudhachuudhaan olaantummaan xumureera.
Kutaan magaalaa Kolfee Qaraaniyoo waancaawwan lamaan sadarkaa lammaffaa yoo argatu, kanneen hafan shanan ammoo meedaaliyaafi badhaasa waraqaa hirmaannaa keessummoota harkaa fudhataniiru.
Tapha guutuu ispoortii aadaa kana ilaalchisuudhaan gaazeexaan Bariisaa ittigaafatamaa Biiroo Dargaggootaafi Ispoortii Bulchinsa Magaalaa Finfinnee, Obbo Nigaatu Daanyaachawu haasofsiseera.
Ittigaafatamaan kun akka ibsanitti, tapha kanarratti kutaaleen magaalattii kurnanuu akka hirmaatan duraan durfamee itti himamus dhumarratti kutaaleen magaalaa Gullalee, Nifaasilki Laaftoofi Addis Katamaa qooda hinfudhanne.
Bu'uura ispoortii ammayyaa kan ta'e ispoortii aadaa kanaaf eenyuyyuu taanaan xiyyeeffannaa kennuufiin hirmaachuu qaba jedhanii, sabababiin hirmaachuu dhabuu kutaalee magaalaa kanneeniis kan qoratamu ta'uu eeru.
Ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa qofa osoo hinta'in hambaa biyyaatti kan jedhan ittigaafatamaan kun, mootummaan akkuma ispoortiiwwan biroo bajata ramaduudhaan gaggeessaa jira jedhu.
Haata'u malee qaamoleen dhimmi ilaallatu hambaa kanaaf xiyyeeffannaa gahaa kennuu dhabuun ispoortichi akka laafu gochuusaaniitti qeeqaniiru.
Torban kana/This_Week 11820
Torban darbe/This_Month 91657
Guyyaa mara/All_Days 1603615